Xasan Sheekh: “Madaxweyne Xil-gaarsiiye ma noqdo sida Xukuumadda & Baarlamaanka oo kale”. - Banaadisom
Home Wararka Maanta Xasan Sheekh: “Madaxweyne Xil-gaarsiiye ma noqdo sida Xukuumadda & Baarlamaanka oo kale”.
Xasan Sheekh: “Madaxweyne Xil-gaarsiiye ma noqdo sida Xukuumadda & Baarlamaanka oo kale”.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ahayn Xil-gaarsiiye sida uu hadalka u dhigay.
Xasan ayaa sheegay in Maxmaed Cabdullaahi Farmaajo ay uga dhammaatay gaarsiinta xilka Madaxweynaha markii uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax markale u tartamaya booska uu joogo.
“Madaxweynaha waqtiga waxa uu ka dhammaaday marka uu ku dhawaaqay in uu yahay murashax, meel aan ku iri ma jirto & waxbaa laga sheeeg-sheega balse waad taqaaniin oo hadda kahor waan sheegay sida ruuxaanta ayuu dadka uga dhex hadlaa Madaxweynahu, xaqna uma lahan in uu sii wado howlaha Amniga & Doorashooyinka” Sidaasi waxaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Dastuurka Dalka ayuu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in uu wax weliba kala caddeeyay, isla markaana aysan ka dhigneen in uu yahay xil-gaarsiiye, keliya xil-gaarsiinta loo ogol yahay Baarlamaanka & Xukuumadda oo sii wadaya howlaha qabyada ah.
“Madaxweynuhu xil-gaarsiin ma noqon karo dastuurkana meel ay uga taallo ma jirto, Xukuumad xil-gaarsiin ah waala maqlay waana la arkay, Baarlamaanka Sidoo kale, waxaana la heshiinay Xukuumadda oo aan uga fadhiyo fulinta waxa aan ku ballanay” ayuu sii raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud.
Muddo xileedka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaaday 8-dii Febaraayo 2021 oo laga joogo 23-Cishe, waxaana qabsoomin doorashooyinkii lagu ballamay 17-kii September 2020 balse loo ballansan yahay in maalmaha soo socda ficil loo badalo sida ay qorsheysay Beesha Caalamka oo hormuud u ah howsha socota.